FAQs - Shanghai Gokai Viwanda Co, Ltd.
Isu tiri nyanzvi yekugadzira ine makore gumi nemaviri mundima ino. Isu takabatanidzwa nefekitori uye mutengesi
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU, DDP (zvinoenderana nevatengi chikumbiro)
T / T, L / C pakuona, Paypal, Western Union
Mari yako ndeyei?
About 10-30days, zvinoenderana neyedu yekugadzira purogiramu uye yako odha ruzivo.
Une muongorori here?
Hongu tine muongorori. Ivo vaigara mufekitori uye vachiongorora kubva kune izvo zvinhu kuenda kuzvinhu, isu tinotarisa uye tinotora mafoto panguva yese yekugadzira
Iwe unopa sampuli, yemahara kana yekuwedzera?
Samples akasununguka, asi mitoro inoda kubhadharwa padivi pako.
Ndingawana sei mutengo wakanakisa?
Ndokumbira upe ruzivo rwechigadzirwa pane zvaunoda kuitira kuti ndikwanise kukupa chakanakisa kupa munguva yekutanga. Chero dhizaini uye zvimwe zvinodiwa zvinogona kutaurwa kwatiri gare gare muWhatsApp, WeChat, Skype, Tsamba uye dzimwe nzira. Simbisa mutengo.
MOQ ndeye 1 tani. Kwakasiyana ukobvu uye moq zvakasiyana.
Kushanya kwefekitori kana kuongorora kunotenderwa?
Hongu, kushanya kwefekitori kunogara kuchingogamuchirwa uye kuongororwa senge kwechitatu-bato kuongorora zvakanaka.
Yakawanda sei inogona kutakurwa mumudziyo uzere?
20ft mudziyo, pamwe nhovo, mutoro anenge 16-21 matani, pasina nhovo, mutoro anenge 20-24 matani 40ft mudziyo, mutoro anenge makumi maviri nematanhatu matani.
Tumira chako chakadzama chikumbiro → Dhizaini yako → Simbisa chitaurwa & ita muripo → Mould bvunzo → Kugadzira sampuli → Samples bvunzo (Kubvumidzwa) → Misa kugadzirwa → Kuwanda kutarisa → Kurongedza → Dhirivhari → Mushure meSevhisi → Dzokorora Kurongeka ...
Inogona kuve Ocean Shipping, Airlift uye Express (EMS, UPS, DHL, TNT, uye FEDEX). Saka usati waisa odha, ndapota taura nesu kuti tivimbise nzira yaunofarira kutumira.
Iwe unopinda chero expo?
Ehe, kazhinji tinopinda chiratidzo chiratidzo muShanghai kaviri pagore (imwe munaKurume uye imwe munaGunyana). Uye isu takapinda SGI Dubai, Fespa Europe, nezvimwe. Mune ramangwana isu tichawedzera China Kunze uye Export Fair (Canton Fair) mune yedu yekuratidzira runyorwa, zvakare mamwe emunyika kufumurwa ayo anozobata munyika dzakasiyana.
Ko zvakadii mushure mekutengesa sevhisi?
Kana paine chero matambudziko ehunhu kana iwe uchinge wagamuchira zvigadzirwa zvedu, tiratidze mapikicha uye mushure mekukurukura isu tinopa avo vakarasika kubva kunotevera odha.